बर्सेनि बढ्दैछन् महिला दुर्व्यसनी
काठमाडौं : ‘अहिले आएर बुझ्दैछु– लाइफ साँच्चिकै ब्युटिफुल रहेछ। ढिला गरी बुझे पनि मैले अब जिन्दगीको महत्‍व बुझिसकेँ।'
चार वर्षसम्म लागुऔषधको दुव्र्यसनी बनेकी धनगढीकी १९ वर्षीया निक्की शाह (नाम परिर्वतन) ले बल्ल जिन्दगीको महत्‍व बुझेकी छिन्।हाल दुव्र्यसनबाट मुक्ति पाउन काठमाडौँ, रामकोटस्थित सहारा नेपाल पुनःस्थापना केन्द्रमा भर्ना भएकी उनी दुव्र्यसनमा फस्नुको त्यति ठूलो कारण भने छैन। ‘पहिले ममीले मलाई भन्दा दिदीलाई धेरै माया गरेजस्तो लाग्थ्यो,'उनले सुनाइन्, ‘यही कारण फ्रस्ट्रेसन भयो, दुव्र्यसनी बनेँ।
तर, म गलत रहेछु।जन्म दिने आमाले पनि त्यस्तो किन गर्नुहुन्थ्यो र ?' उनी सानै छँदा बुवाको मृत्यु भयो। आमासँग हुर्किइन्। अहिले काठमाडौँको एउटा क्लेजमा १२ कक्षामा अध्ययनरत निक्कीको पूर्ण रूपमा ठीक भएपछि अध्ययन गर्न विदेश जाने र आमालाई पाल्ने योजना छ।
दिदी–भिनाजुको ‘केयर' मात्रै उनका लागि आमाबुबाको माया बिर्साउन काफी भएन। र, एक्लोपन भुलाउन उनले लागुऔषधको सहारा लिन थालिन्। ‘सानैदेखि आमाबुबादेखि टाढै बस्नुपर्‍यो,' उनले सुनाइन्, ‘ ममीड्याडी नै सँगै नभएपछि एक्लो फिल भयो। ड्रग्स लिन थालेँ।' १४ वर्षकी हुँदा नै साथीभाइको संगतमा लागुऔषध लिन थालेकी उनी अहिले सहारा नेपाल पुनःस्थापना केन्द्रमा छिन्।चार महिनादेखि त्यहाँ उपचार गराइरहेकी उनी अहिले आफूमा सुधार आइरहेको बताउँछिन्। सुधारगृहमा लगिदिएकोमा उनी भिनाजुप्रति आभारी पनि छिन्।
२३ वर्षीया निशा थपलिया (नाम परिर्वतन) ले सानैदेखि होस्टेलमा बसेर पढिन्। बुबा विदेशमा थिए, आमा घरमै व्यस्त। उनलाई पढाउने, घुमाउने समय कोहीसँग थिएन। एक्लो महसुस गरिरहेकी उनले होस्टेलमै साथी संगतबाट चुरोट खान थालिन्। लागुऔषधको नशामा डुबिन्। छाड्न चाहेर पनि नसकेकी उनलाई अहिले परिवारले नै सुधारकेन्द्रमा हालिदिएको छ।निशा भन्छिन्, ‘ममीहरूले सानैदेखि केयर गरेको भए म यता लाग्दिन थिएँ होला।'
केही समय उनीहरू ‘डेटिङ' पनि गए।तर, केटाका धेरै गर्लफ्रेन्ड रहेछन्। त्यो थाहा पाएपछि उनलाई पीडा भयो। ‘टेन्सन हट्छ भनेर एक दिन साथीसँग मिलेर गोटी खाएँ,' उनले सुनाइन्, ‘त्यहाँदेखि त यसको नशा लाग्यो। गोटीबाट बिस्तारै इन्जेक्सनसम्म लिन थालेँ।'काठमाडौँ, हात्तीगौँडास्थित दृष्टि नेपाल पुनःस्थापना केन्द्रकी अध्यक्ष परिन सुब्बा प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि आफ्ना प्रेमीलाई देखाउनकै लागि केही युवती दुव्र्यसनमा फस्ने गरेको बताउँछिन्। ‘प्रेम टुटेको झोकमा दुव्र्यसनमा लाग्ने युवती पनि थुप्रै छन्,' उनी भन्छिन्, ‘अभिभावकले पनि छोरीलाई उमेर पुगेपछि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर बाटो देखाउँदैनन्। आफ्नो बाटो आफैँ खोज्दा गलत बाटोमा जान्छन्।'
चिनजानको एक वर्षपछि बिहे पनि गरिन् तर श्रीमान्सँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि उनी बिस्तारै लागुऔषधको दुव्र्यसनमा फसिन्। ‘काठमाडौँ आएर अनेक दुःख भोगियो, आफ्नो जीवनदेखि वाक्क लागिसकेको थियो,' एनीले सुनाइन्, ‘बिहे गरे जिन्दगी सेटल होला, जिन्दगीमा सुख होला भनेर बिहे गरेँ तर सोचे जस्तो भएन। श्रीमान् अर्कै केटीसँग हिँड्न थालेपछि मलाई जिन्दगीदेखि नै वितृष्णा जाग्यो।'
श्रीमान्‍ा्सँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि उनी छोरा लिएर एक्लै बस्न थालिन्। ‘श्रीमान्‍ा्सँग झगडा पनि धेरै भयो, धेरै पटक सुसाइडको कोसिस पनि गरेँ,' उनले विगत सम्झिइन्, ‘त्यसपछि गाँजा खान सिकेँ। हेरोइन, ट्याब्लेट सबै लिएँ। छुट्टै संसारमा पुगेजस्तो भयो। कसैको पनि केही मतलब भएन।' सात वर्षअघि दुव्र्यसनबाट मुक्त भएकी उनी अहिले दुव्र्यसनीमा परेका महिलाका लागि सहारा नेपाल पुनःस्थापना केन्द्र चलाइरहेकी छिन्।
‘सेक्सी’ र ‘स्लिम' भइन्छ भन्ने भ्रममा लागुऔषध सेवन गर्ने युवती पनि छन्। विराटनगरकी २१ वर्षीया विनिता भट्टराई (नाम परिर्वतन) पनि त्यस्तै भ्रममा परेर दुव्र्यसनी बनिन्। उनी सानैदेखि अलि मोटी थिइन्। साथीहरूले उनलाई ‘भैँसी' भन्दै जिस्क्याउँथे। यस्तो व्यवहारले उनलाई दिक्क लाग्थ्यो।
एक दिन उनलाई ‘स्लिम' भएर ती साथीलाई देखाइदिने सोच आयो। त्यसका लागि उनले मर्निङवाक गरिन्। बिहान कागती–पानी र बेलुका साग, फुलफूल मात्र खाने गरिन् तर ज्यान घटेन।
कलेजकी साथीले एक दिन उनलाई ‘स्लिम हुने औषधि खान्छेस्?' भन्दै लोभ्याइन्। ‘फिगर स्लिम हुन्छ, आँखा स्मोकी हुन्छ, सेक्सी देखिन्छ भनेपछि मलाई आफ्नो सपना पूरा हुने आशा पलायो,' अहिले दृष्टि नेपाल पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचार गराइरहेकी उनले भनिन्, ‘ड्रग्स लिँदा सुरुमा त अलि स्लिम र सेक्सी भएको फिल पनि भयो तर बिस्तारै एडिक्ट भैसकेकी रहेछु।'
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख डीआईजी ठूले राई महिलाहरू दुव्र्यसनीबाट कारोबारीसमेत बन्न थालेको र यो बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन्। ‘पक्राउ पर्नेमा लागुऔषध दुव्र्यसनी र कारोबारी किशोरी÷युवती दुवै उत्तिकै छन्,' उनले भने, ‘यो बढ्दो क्रममा छ।' नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०६७ देखि २०७४ को बीचमा ९ सय १९ जना महिला विभिन्न लागुऔषधसहित पक्राउ परेका छन्। प्रत्येक वर्ष लागुऔषध दुव्र्यसन र कारोबारमा पक्राउ पर्ने महिलाको संख्या बढ्दो रहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ।
‘छोरीलाई बेवास्ता गरिन्छ'
​एनी राई,सञ्चालक, सहारा नेपालसञ्चालन
त्यो हामीले अहिले पनि भोगिरहेका छौँ। ड्रग खाएको, पुनःस्थापना केन्द्र लगेको समाजले थाहा पाउने डरले अविभाकले त्यसलाई लुकाउनुहुन्छ। भोलि छोरीलाई कसैले बिहे गर्दैन भन्ने डर उहाँहरूलाई हुन्छ। तर, त्यो भनेको रोग लुकाउनु हो। रोग लुकाउँदा दुव्र्यसनीलाई अझ खतरा हुन्छ। ‘केटी मान्छे बिहे गरेर अर्काको घर जाने जात हो, यसका लागि किन पैसा र्खच गर्ने' भन्ने मानसिकता पनि केही अभिभावकमा हुन्छ। छोरालाई सुधारका लागि जति पनि खर्च गर्न अभिभावक तयार हुन्छन् तर छोरीलाई बेवास्ता गरिन्छ। हाम्रै सुधारकेन्द्रमा पनि धेरैले महिलालाई ल्याएर छोड्नुहुन्छ तर त्यसपछि वास्ता गर्नुहुन्न।
‘यसरी बनेँ दुव्र्यसनी'
श्रीमान्सँगको बिछोड, छोरीहरूको जिम्मेवारीलगायत तनावले मैले २५/२६ वर्षको हुँदा ड्रग लिन थालेँ। पसलमा केटा साथीहरू आइरहन्थे। उनीहरूको संगतले ब्राउन सुगर, गाँजा, ट्याब्लेट सबै लिएँ। भारतीय सीमानजिकै भएकाले किनेर ल्याउन सजिलै थियो। पछि ड्रग प्रयोग गर्न छाडेँ तर बेस्कन रक्सी खान थालेँ। घरमा एक्लै हुन्छु। एक्लै हुँदा के गरौँ, कसो गरौँ हुन्छ। त्यसपछि अल्कोहल लिन्छु।
सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण कुरा, आफ्ना सन्तानलाई दुव्र्यसनमा फस्न नदिन अभिभावकको ठूलो हात हुन्छ। अभिभावकले आफ्ना सन्तान कहाँ गइरहेका छन्, कस्तो साथी संगतमा छन् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। स्कुल÷कलेज पठाएर, सन्तानको खर्च धानिदिएर मात्रै अभिभावकको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। आफ्ना बच्चाले ठीकसँग पढे/नपढेको, उनीहरूको व्यवहार के–कस्तो छ आदि विषयमा पनि अभिभावकले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।